Selena မဟုတ်တဲ့ သူ့အချစ်ဉီးအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Justin Bieber
On April 19, 2018 By fairy
အားလုံးသိထားတဲ့ Selena ဟာသူ့အချစ်ဉီးဆိုတာ 100% မမှန်ကန်ကြောင်းကို Justin Bieber ကသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ သူ့အချစ်ဉီးပုံကို instagram မှာ ချပြခဲ့တာပါ။
“When I was 13 I had my first love”
ဆိုပြီး ကြွေးကျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ Justin ရဲ့ အချစ်ဉီးဟာ Selena မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူများလဲဆိုတော့……
ဟိဟိ နောက်ထာဘာ? အက်မင်နောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်…. အဲ့ပို့စ်အောက်မှာ သူ့ကိုပြန်ပြောင်ထားတဲ့ comment တွေနဲ့ ကြေကွဲနေတဲ့ fan တွေရဲ့ comment တွေလဲ အများကြီးတွေ့ရမှာပါ။
ပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းလေးကပဲ သူ့ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ Rachel Bieber ကိုလဲ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ညီမလေးဖြစ်တဲ့ Rachel Bieber ဟာ သူနဲ့ တော်တော်လေးကိုဆင်ပြီး ကိတ်လဲတော်တော်ကိတ်ပါတယ်။ Justin ကိုယောက်ဖ လို့သာပြေးခေါ်လိုက်ကြပါတော့ အမျိုးတို့ရေ…?
အရင်တုန်းက အမျိုးမျိုးပြဿနာတွေရှာပြီး ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Justin တစ်ယောက် ဒီနှစ်ထဲမှာ တော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ရင့်ကျက်လာတယ်လို့ ဆိုရမလားမသိ.. ဟိုတလောကပဲ သူ့ကားကိုအနောက်ကဝင်အောင်းတဲ့သူကိုတောင် ရန်မတွေ့ပဲ ဖေးကူတာမျိုး၊ လမ်းဘေးက Homeless တွေနဲ့ စကားလက်ဆုံပြောနေတာမျိုးတွေနဲ့ မနေ့တနေ့ကပဲ Coachella ပွဲမှာ ကောင်မလေးကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားနေတဲ့ငနဲသားကို ပညာပြတာမျိုးလေးတွေကိုကြည့်ရရင်တော့ အရင်လိုမဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲလာနေပါလားလို့ အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ တရားဝင်ဘယ်သူနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမယ့် Baskin Champion နဲ့တွဲနေသလိုလိုသုံးသပ်နေတဲ့ သတင်းတွေကတော့ ကြားနေရပါတယ်။ အက်မင့်အနေနဲ့ ဘယ်သူနဲ့သဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတာမျိုးထက် Justin ရဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးမိပါတယ်….
PREVIOUS POST Previous post: ACM မှာ Vocal Event of The Year ဆုကိုဆွတ်ခူးလိုက်တဲ့ Keith Urban နဲ့ Carrie Underwood
NEXT POST Next post: ‘DAMN’ Album နဲ့ ပူလစ်ဇာဆုရသွားခဲ့တဲ့ Kendrick Lamar